Ebe ndebe ihe omume na ihe omume - IntoKildare
Mee ka obi gị na-agba ọsọ site na njem dịpụrụ adịpụ, nweta ihe ịtụnanya nke egwuregwu gọọlfụ ụwa, ma ọ bụ mee ka obi dajụọ ọbụna mkpụrụ obi obi jọrọ njọ na njem ntụrụndụ na-agbada ọwa mmiri ama ama Kildare.
Ọchịchọ na mwụfu na Co. Kildare abụghị naanị egwuregwu ndị na-agba ịnyịnya - mpaghara ahụ bụkwa ebe obibi nke ọtụtụ ebe egwuregwu kacha mma nke Ireland iji mee ka ndị adrenalin junkies nwee obi ụtọ. Site na ịnyefe Lewis Hamilton ime gị na Mondello ka ịgba ụta na paintball na Oke ugwu, Kildare bụ ebe zuru oke iji mee ka ndị na-eto eto sulks n'ọnụ mmiri (na enweghị ihuenyo na-ahụ anya!).
Chee echiche banyere ihe omume n'èzí na gọlfụ nwekwara ike ịbata n'uche. Kwa afọ, usoro ọmụmụ anyị ama ama na oge ochie na-achọ ọtụtụ puku ndị gọọlfụ si n'akụkụ ụwa niile ka ha nweta ahụmịhe egwuregwu ahụ.
Ịkwọ ụgbọ mmiri na ịkwọ ụgbọ mmiri na Kildare bụ ahụmahụ nke dị omimi karịa ụtọ ozugbo ịnọ n'ime mmiri. N'ebe a, njem n'okporo ụzọ mmiri anyị bụkwa njem n'oge gara aga. N'ihi na ị na-eme njem n'otu ụzọ mmiri—ma na-anụ ụtọ otu vistas—nke ọtụtụ ndị mmadụ jiworo mee ihe kemgbe ọtụtụ narị afọ tupu gị. N'ime kilomita 82 nke osimiri na ọwa mmiri, Kildare bụ paradaịs maka ndị hụrụ mmiri n'anya.
23 nsonaazụ (s)
Ihe Omume Dynamic
Mmemme ụlọ ọrụ na-enweta ihe nrite na ihe omume ụlọ otu maka otu mmadụ 10 – 1000+.
Igwe dị ebube nke Ireland
Emebere ụzọ ndị dara okomoko site na Ireland.
Onweghi ihe na-eme ka obi dị mmadụ ụtọ taa n’ọsọ agba ọsọ na Naas. Akwa nri, ntụrụndụ na ịgba ọsọ!
Oflọ nke Irish Jump Racing na ndị ọbịa maka ụbọchị ise ụbọchị ememme Punchestown. Ebe mmemme klaasị ụwa.